Iche n'etiti a Desktọpụ na Online FLV Ntụgharị r
Tụnyere n'etiti A na desktọọpụ na An Online FLV Ntụgharị
> Resource> Video> Comparison N'etiti A na desktọọpụ na An Online FLV Ntụgharị
Ị na-enwe nsogbu na-ekiri ihe FLV media faịlụ na gị Android mobile ekwentị? Ọ bụ akaha n'ihi na ị na-aghọta na mobile Flash ngwa n'ezie e kwụsịrị site Adobe. N'ihi ya ị ga mkpa ka ma ibudata Flash Player aka ma ọ bụ na-agbalị iji tọghata faịlụ tupu playback na gị Android ekwentị mkpanaaka.
Iji ibudata Flash Player, ọ na-atụ aro ka ị na-agụ n'ime Adobe si Community. Ozugbo arụnyere, na-agbalị mmeghe a Flash-na saịtị ahụ ma ọ bụrụ na-arụ ọrụ. Alternatively, na-agbalị iji tọghata ya site na online FLV Ntụgharị (Method 1) ma ọ bụ a na desktọọpụ Ntụgharị (Method 2).
Usoro 1: Online FLV Ntụgharị
Method 2: Desktọpụ Ntụgharị
The mfe ụzọ si dị iji tọghata gị FLV faịlụ online. Ihe niile ị chọrọ bụ njikọ Ịntanetị. Oge a chọrọ maka njikọ na-adabere na gị faịlụ size nakwa dị ka ọsọ nke njikọ. Ị nwere ike tọghata gị FLV faịlụ na ma otu n'ime ndị na Ndepụta nke Online Video converters. Niile nke depụtara online FLV converters ga-enwe ike iji tọghata gị faịlụ ka ọtụtụ dị iche iche formats maka playback na gị Android ngwaọrụ mkpanaaka. Karịsịa maka MP4; Nke a bụ ihe ruru eru maka ị na-elele na a nta ihuenyo size.
Ị nwere ike ma ikpuru-na-dobe bulite gị faịlụ (na-adabere oke nke online converters) ma ọ bụ na-agagharị ya si gị Obodo nchekwa. Ọ bụrụ na-akwado, ị nwekwara ike idetuo na mado URL na bulite igbe. Mgbe ahụ, nanị Tinye ma ọ bụ pịa na tọghata bọtịnụ.
A na desktọọpụ Ntụgharị ọzọ bụ ezigbo mgbe na-abịa n'ịtụgharị gị FLV media faịlụ na batches. Ị pụrụ nanị tọghata a faịlụ otu oge site na online FLV converters. Otú ọ dị, na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate, ị nwere ike ozugbo bulite dị ka ọtụtụ faịlụ ka ị chọrọ. Na n'elu nke, ị ga-enwe ike ime ihe na gị mgbasa ozi faịlụ dị ka ụfọdụ ndị bụ isi edezi tupu akakabarede ma ọ bụ gbaa ya jidesie a DVD.
Ọ bụ na-kemgwucha aka ka nwere ndị na preset nke mmepụta formats paired na nke kacha mma ntọala. The sleek ma onye ọrụ-enyi na enyi interface na-eme ka ya ọbụna karị adaba n'ihi na ndị mgbe eji dị otú ahụ software tupu, ma ma ka na-enwe ike ịrụ ihe ọ bụla ha mkpa.
Nanị agụ site dị iche iche nhọrọ n'okpuru maka ya nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka.
Nhọrọ 1: Tọghatara Specific Android Ngwaọrụ
Kama nke nwere chepụta nke bụ ihe kasị mma ọnọdụ ma ọ bụ mmepụta format akwadoro maka gị Android na ekwentị mkpanaaka, niile i nwere ime bụ họrọ ya dabeere na Ngwaọrụ.
Ịdọrọ-na-dobe gị FLV faịlụ,
Họrọ ụdị nke Ngwaọrụ si mmepụta Format,
Nhọrọ 2: edezi Files
Ewepụtụ ma ọ bụ ubi gị videos Otú ọ dị na ị chọrọ, ma ọ bụ ọbụna ruo n'ókè nke itinye ụfọdụ mmetụta. I nwekwara ike itinye na mpụga sobtaitel iji wuchaa gị video.
Pịa Dezie na-amalite edezi gị faịlụ,
FLV ka AVI Ntụgharị: Olee otú iji tọghata FLV ka AVI
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere dazzle video kpọọ
Olee otú iji tọghata Videos si na H.265 Files
Kasị Video Ntụgharị: tọghata Video ọ bụla Format
Olee otú Ọkụ DVD on OS X Mavericks
Video Remaker: Easily Metụ Up Exsiting Videos